Umaki: ukwenziwa kokuguqulwa | Martech Zone
Umaka: ukuguqulwa kokuguqulwa
Ukusebenziseka Kwezinga Lokuguqulwa: Umhlahlandlela Wezinyathelo Ezi-9 Kumanani Akhuphukile Okuguqulwa
NgoLwesibili, ngo-Mashi 2, i-2021 NgoLwesibili, ngo-Mashi 2, i-2021 Douglas Karr
Njengabakhangisi, sihlala sichitha isikhathi sikhiqiza imikhankaso emisha, kepha asihlali senza umsebenzi omuhle sibuka esibukweni sizama ukwenza ngcono imikhankaso nezinqubo zethu ku-inthanethi. Okunye kwalokhu kungahle kube ukuthi kuyamangaza… uqala kuphi? Ingabe ikhona indlela yokwenza isilinganiso sokuguqulwa (CRO)? Yebo yebo… kukhona. Ithimba le-Conversion Rate Experts linendlela yalo ye-CRE ababelana ngayo kule infographic abayifakile
3 Amasu Wokulandelana Kwe-imeyili Okhulisa Amanani Wokuguqulwa
NgoMsombuluko, Januwari 25, 2021 NgoMsombuluko, Januwari 25, 2021 Douglas Karr
Uma ukumaketha kwakho okungenayo kuchazwe njengofanele, ngingachaza ukumaketha kwakho kwe-imeyili njengesitsha sokubamba imikhondo ewela phakathi. Abantu abaningi bazovakashela isiza sakho futhi bahlanganyele nawe, kepha mhlawumbe akusona isikhathi sokuguqula empeleni. Kuyi-anecdotal kuphela, kepha ngizochaza amaphethini ami lapho ngicwaninga ipulatifomu noma ngithenga ku-inthanethi: Ukuthenga kwangaphambili - ngizobuyekeza amawebhusayithi nemithombo yezokuxhumana ukuthola imininingwane engingayithola mayelana
ISIKHATHI: Khulisa ikhasi lakho lasekhaya noma lekhasi ngalezi zingxenye ezi-7 zokuqukethwe
NgoLwesine, Juni 6, 2019 NgoMgqibelo, Juni 8, 2019 Douglas Karr
Eminyakeni eyishumi edlule, sizibonile izivakashi kumawebhusayithi ziziphatha ngendlela ehlukile. Eminyakeni edlule, sakha amasayithi abala uhlu lwemikhiqizo, izici, nolwazi lwenkampani… konke obekugxilwe kulokho okwenziwa izinkampani. Manje, abathengi namabhizinisi ngokufanayo bahlala emakhasini asekhaya nasemakhasini okufika ukuze bacwaninge ukuthenga kwabo okulandelayo. Kepha abafuni uhlu lwezici zakho noma izinsizakalo, bafuna ukuqinisekisa ukuthi uyaziqonda nokuthi nguwe